Hordhaca: Juventus vs Barcelona, Marwada Duqda oo doneysa iney Guul gaarto Kulankan -WARBIXINTA KULANKA
Thursday, January 24th, 2019 - 09:01:58
Wednesday November 22, 2017 - 09:13:18 in Wararka by
Arboco - Yurub
kulanka:Juventus v Barcelona
Garoonka: Allainz Stadium
-WARARKA LABADA KOOX
Sporting waxa ay ku sii jiri doontaa tartanka haddii ay badiyaan laakiin ma awoodi doonaan inay ku dhameystaan labada kaalimood ee ugu sareysa haddii laga badiyo ama haddii ay barbaro galaan islamarkaana Juventus laga badin waayo. Barbaro waxa ay u xaqiijineysaa kaalinta 3aad.
Olympiacos waxay ku qasban yihiin inay badiyaan islamarkaana Juventus laga badiyo si ay u sii noolaato rajadooda labada kaalimood ee ugu sareysa. Haddii Olympiacos ay badin weyso waxa ay ku dhameysan doonaan kaalinta afaraad.
Daafaca dhexe Gerard Pique ayaa mar kale diyaar u noqon doonta Barcelona ka dib markii uu ganaax ku seegay kulankii ay barbaraha goolal la’aanta la soo galeen kooxda Olympiakos ee Champions League.
Lix ciyaartoy oo ka mid ah kooxda Blaugrana ayaa dhaawac ku maqan caawa kuwaasoo kala ah: Ousmane Dembélé, Rafinha, Arda Turan, Sergi Roberto, André Gomes iyo Javier Mascherano.
Dhanka kooxda Juventus goolhaye Gianluigi Buffon iyo daafaca Andrea Barzagli ayaa la filayaa inay ku soo laabtay shaxda Bianconeri ka dib markii la nasasiiyay kulankii Serie A ee isbuucaan, halka sidoo kale Miralem Pjanic uu ka soo laabtay dhaawacii uu ku maqnaa laakiin xiddiga khadka dhexe Federico Bernardeschi ayaa dhaawac muruqa ah ku seegaya kulanka caawa.
●Juventus lagama badin 17 kulan oo ka mid ah 19kii kulan ee ugu danbeysay Champions League .
●Juventus ayaa badisay l seddexdii kulan ee ugu danbeysay ee ay garoonkooda ku wajahaan Barcelona tartamada oo dhan.
●Barca ayaan laga badinin 5tii kulan ee ugu danbeysay (UEFA Champions League League).